AMANDLA AMA-5 AMANGALISAYO AMANTSHONTSHO ASEBUSUKU ONOKUNGAWAZI - IMPILO
Amandla ama-5 aMangalisayo amaNtshontsho asebusuku onokungawazi
Ndiya kuba ngowokuqala ukuvuma ukuba zininzi izibonelelo zokuba yintaka yokuqala. Ufumana ilanga liphuma ngezinye iintsuku, uyonwaba kwimozulu yasekuseni epholileyo, kwaye uyakhuthazeka ukuba uqalise usuku lwakho nohlobo oluthile lomthambo. Ungayichazanga eyokuba, uphakame phambi kwabantu abaninzi, oko kuthetha ukuba ufumana ukonwaba kancinci ngaphambi kokuba umhlaba uqalise ukuxhokonxa.
Oko kwathiwa, kufanele kubekho izibonelelo zokuba sisikhova sasebusuku ngokunjalo, akunjalo? Ewe zikho. Eyona nto yayindimangalisa kukuba ikhona kakhulu izibonelelo ezininzi.
uyithanda njani intlalontle
Ke, zizuza ntoni izikhova zasebusuku ngokuhlala kude kube ngentsasa nganye busuku ngabunye?
1. Banokuba nobukrelekrele.
Ngelixa izikhova zasebusuku zingayi kuba nazo naye kuninzi lokuzuzisa ngokwengqondo ngaphezu koogxa bazo bokuqala beentaka, uphononongo lubonakalisile ukuba abo bahlala kude kube sebusuku kwaye balale rhoqo krelekrele kancinane kunabo bahlala bevukile ekuzeni kokusa.
Izizathu zoku zisekwe kwimibono embalwa yesayensi ye-avant garde enxulumene nendaleko-ngakumbi ukuba izinto ezinomdla kwindalo ezinje ngokungahoyi imijikelo yokulala ngokwesiko zibonisa amandla okuziqhelanisa.Intengiso
Ewe kunjalo, loo nto ayithethi ukuba izikhova zasebusuku ziyafumana konke yeerks. Ngelixa isimilo sabo sinokudityaniswa kubukrelekrele obuphezulu, okunye izifundo bonisa ukuba ukuba yintaka yokuqala kunika umntu ithuba eliphezulu lokuphumelela ebomini.
Ke mhlawumbi kungcono ukuba ngumxube weentaka zombini. Mhlawumbi singayibiza ngokuba sisikhova sokuqala?
2. Bayile ngakumbi.
Ukuhlala kude kube sebusuku ngokungaguquguqukiyo kuyabonakala ukuba yinto enjalo, ukuba iguqula indlela esebenza ngayo ingqondo yakho. Ewe, ukuba sisikhova sasebusuku iyakhuthaza Ingqondo yakho icinge ngezisombululo kunye nemibono engaphaya kobuchule bemveli.
Ngokwengcali yokulala UJim Horne , oku kuthetha ukuba izikhova zasebusuku kunokwenzeka ukuba zibe ziimbongi ezinempumelelo, amagcisa, kunye nabaqambi, yonke loo nto yimisebenzi efuna ukucinga okuninzi ngaphandle kwebhokisi.
Njenge-owl yasebusuku ngokwam, ndinabo ubungqina obuncinci bokubonisa oku. Ngelixa ndizama ukwenza umsebenzi kusasa, ndihlala ndinezimvo zam ezilungileyo ebusuku. Kuphantse kufana nokuhlala iiyure ezongezelelweyo zivula inxenye yengqondo yam ebendingenakufikelela kuyo kwangoko ngemini.Intengiso
3. Bomelela emveni kwemini.
Ngelixa amandla entaka yakuqala ethanda ukuhlala ehambelana imini yonke, ubuchule besikhova sasebusuku iphakama njengoko iiyure zihamba, zihlala zivumela ukuba bagqithe abo baqala ukukhula ebusuku.
Kwaye ungakhathazeki, ukwanda akunjalo lonto ngqwabalala. Akufani nezikhova zasebusuku ziyakwazi morph kwiHulk ebusuku, okanye nantoni na enjalo. Kuthetha nje ukuba unyamezelo lwabo kunye namandla abo aneencopho kunye neentlambo ngakumbi kuneentaka zakuqala, eziza kunye neenzuzo kunye nezinto ezingalunganga.
Okokuqala, kwenza kube nzima kuthi ukuba sizilolonge kusasa. Ndiyayazi loo nto ngamava. Kodwa kwicala elisezantsi, ndiziva ngathi ndingabaleka ngonaphakade ukuba ndiqala ukuzilolonga nangaliphi na ixesha elidlulileyo ngentsimbi yesi-3.
Ungathumela njani iividiyo ukusuka kwi-iphone ukuya kwikhompyuter
Ke ukuba uyathanda ukusebenza emva kwemini, ukuba sisikhova sasebusuku kuhle kakhulu. Yazi nje ukuba kuya kuba nzima ukwenza nantoni na enyanzelisa umzimba kanye emva kokuvuka, yeyiphi unako yenza kube nzima ukufumana umthambo wakho kwiinyanga ezishushu zasehlotyeni.
4. Bayinxalenye yeqela elidumileyo.
Baninzi abantu abadumileyo abazizikhova zasebusuku, abona bantu baziwayo namhlanje mhlawumbi nguMongameli uBarack Obama, okhetha ukuhlala efunda emva kobusuku ngaphandle kokusebenza iintsuku ezinde ngokumangalisayo.
zeziphi ezona zinto zilungileyo zokunceda ukuba unikele ngazo
Kwaye kuthiwani ngendoda eyagcina iJamani ukuba ingathathi iNgilane ngexesha leMfazwe yesibini (II) yeHlabathi? Kulungile, uWinston Churchill yayisikhova ebusuku naye.
Kodwa ukuba oomongameli kunye nenkulumbuso abayonto yakho, ungalala ngokulula usazi ukuba uMlawuli uNapoleon Bonaparte uthathe ikhefu emini ukuze akwazi yeqa ubuthongo ngokupheleleyo ngezinye iintsuku.
Kwaye kutshanje udliwanondlebe , Umpheki owaziwayo uGordon Ramsay utyhile ukuba ulala iiyure ezine kuphela evekini, ukuhlala kude kube sezinzulwini zobusuku ukuze awenze wonke umsebenzi wakhe (mhlawumbi lonto ichaza ukungxama kwakhe!).
Ndingaqhubeka ngonaphakade, njengoko uluhlu lwabantu abadumileyo abaneendlela zokulala ezingaqhelekanga luhle kakhulu. Ndizakugqiba ngokutyhila ezinye izikhova zasebusuku ezimbini onokuthi uqhelene nazo: odumileyo (kwaye mhlawumbi ongathandekiyo ngokuxhomekeke kwimbono yakho) abasunguli uThomas Edison noLeonardo da Vinci.
Akukho mathandabuzo: ukuba uzijonga njengesikhova sasebusuku, ukwinkampani elungileyo kakhulu.Intengiso
5. Abadingi kulala kakhulu.
Ukuba ufunda amanye amakhonkco angentla exoxa ngemikhwa yokulala yabantu abadumileyo abanjengoChurchill kunye noNapoleon, uyakuqaphela umkhwa oqhelekileyo: bahlala beqa ubuthongo, okanye bathathe indawo yabo ngokupheleleyo ngeempumlo ukuze bahlale kude kube sebusuku kwaye bawugqibe umsebenzi wabo.
Ngethamsanqa kuthi, kukho uphando oluthile olunokuchaza ukuba kutheni kunjalo. Kuyabonakala ukuba, iintaka zakuqala zifuna ukulala ngakumbi kunezikhova zasebusuku, njengoko kutyhilwe isifundo esinye apho zombini iintaka zakuqala kunye nezikhova zasebusuku zacelwa ukuba zilale iiyure ezisixhenxe ngosuku iintsuku ezimbini, apho amandla abo aya kuvavanywa.
Iziphumo zazinomdla: ngelixa iintaka zakwangoko zikwazile ukuqhubeka nesikhova sasebusuku kwiiyure ezilishumi zokuqala emva kokuvuka, zabonisa iimpawu zokudinwa kunye nokungalali ngokwaneleyo ngaphaya kwelo nqanaba. Kwelinye icala, izikhova zasebusuku, zaqhubeka nokusebenza kwinqanaba eliphezulu nasemva kokuba bevukile iiyure ezilishumi. Oko kuthetha ukuthini ukuba, kwi-avareji, iintaka zakuqala zifuna ukulala okungaphezulu-ngaphezulu kweeyure ezisixhenxe ngemini- ngelixa izikhova zasebusuku iiyure ezisixhenxe zihlala zingaphezulu kokwaneleyo.
Nangona ngokuqinisekileyo zininzi izibonelelo zokuba yintaka yokuqala, ukuba sisikhova ebusuku kunezibonelelo zako ngokunjalo. Nangona sihlala sivuka kamva emini, okanye sidinga i-naps ukuze sisebenze ngokufanelekileyo, sikwanakho ukusebenza kwinqanaba eliphezulu naxa silala kakuhle-ngaphantsi kweeyure eziyi-8 ezicetyiswayo ngosuku.
Iimuvi eziza kutshintsha ubomi bakho
Ukuba ulikhova lasebusuku elihlala likhweletela abo banokuzikhupha ngokulula ebhedini ekuzeni kokusa, ngethemba lokuba eli nqaku likubonelela ngenduduzo. Zive ukhululekile ukundixelela naliphi na ibali lakho elinxulumene nesikhova sasebusuku kwizimvo ezingezantsi!Intengiso
Ikhredithi yefoto ebonisiweyo: Ikhowudi kunye neMartini / Ivana Vasilj ngeflic.kr
yintoni inqaku lobudlelwane
indlela yokubhala imizuzu yentlanganiso
Kutheni ukuthambisa kulungele wena
Ngaba incindi yepayinapile inceda umqala obuhlungu
ukuba nesizungu kubudlelwane
izinto ukuthengisa online ukwenza imali
iinjongo onokuzibekela zona kwimizekelo yomsebenzi
Uluntu 2 Inkuthazo Ukuba Ngumzali 2 Ukuba Ngumzali 2 30 Into